News Category 2076/11/12
राजविराज, १२ फागुन ।
स्व. गजेन्द्र नारायण सिंह स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमवार सम्पन्न खेलहरुमा कोईलाडी र मंसापुर बिजय भएका छन ।
सप्तरी क्रिकेट संघ संघको सहकार्यमा तथा तिलाठी कोईलाडी गाउपालिकाको आयोजनामा संचालित क्रिकेट प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा कोईलाडीले लौनियालाई ३८ रनले तथा मंसापुरले को. मधेपुरालाई ३ बिकेटले पराजित गरेको हो ।
पहिलो खेलमा टस जितेर लौनियाले कोईलाडीलाई ब्याटिङ गर्दै १७ ओभरमा २ बिकेट गुमाई १ सय २७ रनको योगफल खडा गरेको थियो । जसमा प्रमेश्वर ५२ रन तथा गुडु २७ रन जोडेका थिए । यता बलिङतर्फ लौनियाका सुरेश कुमार रामले १ बिकेट हात पारेका थिए ।
जवाफमा लौनियाँले निर्धारित १७ ओभर खेल्दै ९ बिकेट गुमाएर ८९ रन मै सिमित भयो । टिमका लागी शिवसुन्दर मण्डल २६, मिधलेश मण्डलले १५ रन बनाएका थिए । यस्तै बलिङतर्फ कोईलाडीका गुडुले ४ बिकेट, सरोज २ तथा रोहित सिँह, रोबिन सिँह, जुगनुले १÷१ बिकेट हात पारेका थिए । खेलको म्यान अफ द म्याच गुडु घोषित भएका थिए ।
यसैगरी सोमबारै सम्पन्न दोस्रो खेलमा को. बरसाईनले १९ ओवर ५ बल खेलेर १ सय ७ रनको योगफल खडा गरेको थियो । जसमा राहुल सानी २२ राजेश दास १९ दिपेश सरदार १५ रन बनाएका थिए । बलिङतर्फ मन्सापुरका महेश मण्डलले ४ ओभरमा १९ रन दिएर ५ बिकेट हात पारेका थिए भने अजय मरिक ३, देवकि नन्दन २ बिकेट हात पारेका थिए ।
जवाफमा मंसापुरले १४ ओभर २ बलमा ७ बिकेट गुमाई बिजयी हासिल गरेका थिए । जसमा धिरज मण्डल अविजित ३८ सुबोध मण्डलले १८ रन बनाए पछि जितका लागि सहज बनेको थियो । बलिङतर्फ मन्सापुरका दिपेश सरदार, सुभाष शर्माले २ तथा विशाल शर्माले १ बिकेट हात पारेका थिए । खेलको म्यान अफ द म्याच महेश मण्डल घोषित भएको आयोजक समितिका संतोषचन्द्र सिंहले दिए ।